FAMATSIANA SOLIKA : Handefa tolo-bidy hahafahana manafatra solika mivantana ny fitondram-panjakana
“Handefa tolo-bidy ho fanafarana mivantana ny solika hamatsiana an’i Madagasikara ny fitondram-panjakana ary hasaina amin’izany ireo orinasa mpamokatra solika rehetra.” 28 octobre 2019
Izay no isany nambaran’ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina nandritra ny fihaonany tamin’ireo vondron’ny mpamokatra solika eto Madagasikara na GPM tamin’ny faran’ny herinandreo lasa teo, tao amin’ny lapam-panjakana Ambohitsorohitra. Tsy nanaja ny fifanarahana nifanaovana mikasika ny famatsiana solika ny GPM izay nihatra tamin’ny toe-karena sy niteraka savorovoro teo amin’ny vahoaka andro vitsivitsy izay. Ny GPM koa dia tsy nanaja ny voafaritra momba ny fanangonana tahirin-tsolika izay tokony haharitra 21 andro hiatrehana izay mety ho tranga hiseho eo amin’ny fanjifana. Vokany, efa ho herinandro mahery no nijalian’ireo mpanjifa ary niteraka fitaintainana izany noho ny tsy fanarahana ireto mpamokatra solika ireto ny fifanarahana ara-dalàna natao taminy.
Nanolotra vahaolana niaraka izy ireo araka izany. Tapaka tamin’izany fa hatsangana ny fitehirizan-tsolika lehibe hahatratra 20,000m³, raha tsy misy afa-tsy 18000m³ no zakan’ny amin’izao fotoana izao, amin’ny volana mey 2020 sy tahiry hafa 29000m³ amin’ny taona 2025 ao Toamasina ho an’ny GRT. Nampahafantatra ihany koa ny GPM fa hisy sambo mpamatsy solika faharoa ho tonga ny 15 novambra ho avy izao. Nazava ny tenin’ny Filoham-pirenena fa tsy ekena ny fandikana ny fifanarahana natao ary nohamafisiny tamin’ireto mpandraharaha ireto ny tokony hanamboarana fitehirizan-tsolika manerana an’i Madagasikara mba hamaliana ny filan’ny vahoaka sy ho fanajana feno ny fametrahana tahirin-tsolika ara-dalàna. Fepetra tsy maintsy nirosoana izao taorian’ireny olana ara-tsolika niseho teto amin’ny firenena ireny.